[Review] Dầu gội Tigi xanh lá cây dưỡng tóc hiệu quả không? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Dầu gội Tigi xanh lá cây dưỡng tóc hiệu quả không? | Muasalebang in Muasalebang
Izinwele zibhekwa njengengxenye efaka isandla kakhulu ebuhleni bokubukeka. Kodwa-ke, abesifazane abaningi ngokuvamile abanaso isikhathi nemali yokunakekelwa kwezinwele kuma-spa namasaluni ezinwele. Kodwa ungakhathazeki, ngoba namuhla sizobuyekeza umugqa I-shampoo eluhlaza ye-Tigi iqinisa futhi ibuyisele izinwele ezilimele “zibusa” imakethe yamanje.
1 Linganisa ubuhle nobubi be-shampoo ye-tigi eluhlaza
2 Ukubuyekezwa kwekhwalithi engu-2 yama-shampoos aluhlaza we-Tigi namuhla
2.1 2.1 I-Tigi Green Shampoo – Ikhanda Le-Tigi Bed Linikeza Amandla Kabusha
2.2 2.2 I-Tigi Bed Head Elasticate Hair Strength Shampoo ithambile
3 Qaphela uma usebenzisa i-shampoo ye-Tigi eluhlaza
Linganisa ubuhle nobubi be-shampoo ye-tigi eluhlaza
Ngaphambi kokuya kokubuyekezwa okuningiliziwe kwemigqa I-shampoo ye-Tigi kuyashisa emakethe. Bafundi, sicela nisijoyine ukuze nihlole ngokushesha izinzuzo nezingozi zalo mugqa i-shampoo ye-tigi eluhlaza ngaphambili.
– Okokuqala, i-shampoo ye-tigi eluhlaza livela ohlotsheni lomkhiqizo i-Tigi – Uphawu oluhweba ngemigqa ehamba phambili yomkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele e-US.
I-Green Tigi Shampoo ihlanza izinwele, idale umgoqo ezinweleni ukusiza ukuvikela izinwele kuma-ejenti ayingozi emvelweni.
Umkhiqizo uhlinzeka ngamavithamini kanye nezakhi zomzimba ukusiza izinwele ezonakaliswe kakhulu emazingeni 1-2 zilulame ngokushesha kusuka empandeni kuya kwelinye ngokuphepha.
– I-shampoo ye-Tigi eluhlaza isiza futhi ekukhanyiseni izinwele ezivunyelwe futhi ezidayiwe, futhi yondle izinwele ukusiza ukwakheka kokuntuleka kwe-keratin ezinweleni. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izinwele azigcini nje ngokunempilo futhi ziyacwebezela, kodwa futhi zinciphisa ukuphuka kahle kakhulu.
– Umkhiqizo usiza ukuthambisa izinwele kahle, usize ukususa ama-frizz ngaphandle kokunamathela noma ukubangela inkwethu.
Ngokuhambisana nalokho, i-Tigi Green Shampoo iqukethe izithako ezingu-25% ezithuthukisa umswakama, ezinekhono lokushelela i-cuticle yezinwele.
– I-shampoo ye-Tigi eluhlaza okwesibhakabhaka Iphunga lizoba namandla impela, ngakho-ke kulabo kini abangezwani nokuzwela, kufanele banake
– I-shampoo ye-Tigi eluhlaza uma ingafaneleki izinwele ezincane kakhulu, noma izinwele ezinamafutha kanye nesikhumba esicasuka kalula
I-Ha Thu O Herbal Shampoo ne-Conditioner Yehlisa Ukuqothuka Kwezinwele, Izinwele Ezisiliva Cocayhoala 300g, COCAYHOALA
Ibhodlela Le-Shampoo LENHLOKO EMAHAMBI 625ml/850ml/1.2L/1.8L, Ikhanda namahlombe
Green Nguyen Xuan Herbal Shampoo 250ml (Ukunakekelwa kwezinwele, ukulungisa umonakalo), Nguyen Xuan
I-Selsun Anti-Dandruff Shampoo (100ml), i-Selsun
I-Shampoo Yamadoda 900g Clear Men Cool Sport Mint ilwa ne-dandruff, ukulunywa namagciwane, iphole usuku lonke, Icacile
I-OGX Shampoo – Umthamo 385ml, Ogx
I-Combo 2 Enchanteur Sensation / I-conditioner yezinwele ezibushelelezi ezithandekayo ezingama-650gr / Ibhodlela, i-Enchanteur
I-TRESEMME I-Keratin Smooth Shampoo Yezinwele Ezomile, Ifomula Yezinwele Ezifriziwe I-Hydrolyzed Keratin Yonza Izinwele Zibe Bushelelezi 850g, TRESemmé
Ukubuyekezwa kwekhwalithi engu-2 yama-shampoos aluhlaza we-Tigi namuhla
Iyiphi i-shampoo engcono kakhulu ye-tigi eluhlaza yezinwele?? Ukukusiza ukuthi ube nempendulo kanye nokukhetha okuphelele kwezinwele zakho, nazi ukubuyekezwa okuningiliziwe esikuthumela kuwe.
2.1 I-Tigi Green Shampoo – Ikhanda Le-Tigi Bed Linikeza Amandla Kabusha
I-Tigi Bed Head Inika Amandla Kabusha eyaziwa nge-shampoo yayo yokunakekelwa kwansuku zonke yezinwele ezijwayelekile kuya kwezinamafutha. Ngaphezu kwalokho, uma usebenzisa i-Tigi Bed Head Re-Energize, uzothola ukuthi izinwele zakho azikhathali futhi azicindezeli kangako, ziletha izinwele ezibushelelezi nezinempilo. Igcwalisa umswakama ophelele, isiza ukubuyisela ukwakheka kwezinwele ezibuthakathaka, okuhle kakhulu ngezinwele ezijwayelekile ezidinga ukunakekelwa kwansuku zonke.
Imikhiqizo ye-shampoo ye-Green Tigi Futhi iqukethe ama-nano-molecules amancane, asebenza ukungena kumugqa ngamunye wezinwele kanye nempande, ngaleyo ndlela akhiphe lonke uthuli nokungcola okunamathela ezinweleni. Iletha ukuhlanzeka, ukupholisa kanye nokukhanya usuku lonke.
Ukwakhiwa kwale shampoo ye-Tigi eluhlaza kuhlanganisa i-Citral – Ukuqinisa nokuthuthukisa ukukhanya. Ihlanganisa i-Polyquaternium ukusiza ukuvala i-cuticle nokusiza ukugcina umbala. Ngokuhambisana nalokho, i-Cocamidopropyl betaine isebenza ukuhlanza, ukomisa nokujiya izinwele.
Ngaphandle kwalokho, umugqa i-shampoo ye-tigi eluhlaza Lokhu kuzobamba ukunaka kwakho kuyoba iphunga layo. Iphunga elimnandi, elimnandi, elinezithelo elingaheha amakhasimende nangaphambi kokuba uvule isivalo. Ngemuva kokugeza, umkhiqizo uzoshiya iphunga ezinweleni zakho isikhathi eside impela, cishe ngakusasa. I-shampoo eluhlaza ye-Tigi inombala omhlophe okhilimu no-pearl, ikhono elihle kakhulu lokukhihliza amagwebu futhi ihlanza izinwele ngokujulile.
Intengo yesithenjwa: 255,000 VND/ibhodlela (shampoo – conditioner pair: 500,000 VND)
Bhekisela: [Review] Ingabe i-shampoo ye-Tigi emhlophe inhle ngempela? Imininingwane 4 izinhlobo
2.2 I-Tigi Bed Head Elasticate Hair Strength Shampoo ithambile
I-shampoo ye-Tigi eluhlaza okwesibhakabhaka Lona umkhiqizo osiza ukubuyisela ubungqabavu, unikeze umswakama, futhi wenze izinwele zibe bushelelezi. Umkhiqizo ubhekwa njengesinqumo esikhethekile sezinwele ezomile nezilimele kancane ezidinga ukudla okufika ngesikhathi, kuyilapho usiza ukuhlanza nokuthambisa ngesikhathi esifanayo. I-shampoo ye-Tigi eluhlaza okwesibhakabhaka iqukethe Amaprotheni ne-elastin ukusiza ukuqinisa izinwele, ukukhulisa ukuguquguquka, ukunwebeka kanye nesitayela esilula kubasebenzisi. Ngokuhambisana nalokho, umkhiqizo uqukethe nama-fatty acids abalulekile namavithamini A no-E ukusiza ukusekela ukukhula kwezinwele okunempilo.
Ngaphezu kwalokho, le shampoo ekhanyayo ye-Tigi eluhlaza okwesibhakabhaka nayo inezindawo zokulwa ne-static, izinwele ezibushelelezi kahle. I-Bed Head Tigi Blue iqukethe ne-Behentrimonium Chloride ukusiza ukuthambisa izinwele. Kuhlanganiswe ne-Lactic Acid ukulungisa izinwele ezilimele. Ikakhulukazi, iphunga lomkhiqizo linamandla okunciphisa ingcindezi kahle kakhulu kubasebenzisi. Kule shampoo ye-Tigi eluhlaza okwesibhakabhaka, kusukela ekusetshenzisweni kokuqala uzothola izinwele zakho ziba thambile, ngoba zinikezwa umswakama ophezulu.
Umkhiqizo usetshenziselwa izinwele ezomile eziphuthumayo, izinwele ezonakaliswe kancane ngenxa yezinhlayiya ze-micro-silicone ezinamathela endaweni yezinwele ezonakalisiwe ukubuyisela nokuvikela izinwele. Ngenxa yalokho, kunganciphisa ukulimala kwezinwele, kukhuphule izikhathi ezingaba ngu-10 zokululama ukwenza izinwele zithambe futhi zigcwele impilo.
Intengo yesithenjwa: 329,000 VND/ibhodlela (shampoo – conditioner pair: 650,000 VND)
Buka Okuningi: [Review] Ingabe i-Tigi Red Shampoo inhle ngempela? Malini
Qaphela uma usebenzisa i-shampoo ye-Tigi eluhlaza
Uma usebenzisa Ishampu ye-Bead Head eluhlaza, Kufanele unake ezinye zezindaba ezilandelayo ukuze uqinisekise ukusetshenziswa okungcono kakhulu nokuphepha kwesikhumba.
Nge-Tigi Green Shampoo, ungayisebenzisa izikhathi eziningi njengoba kudingeka. Kulabo abanama-dandruff amaningi, ungawageza kabili ukuze ususe ngokuphelele amaseli afile kanye nokuvimbela amafutha amaningi esikhumbeni.
Lapho ugeza, kufanele usebenzise amanzi abandayo noma amanzi ancibilikisiwe ukuze ungomisi izinwele zakho njengamanzi afudumele.
Uma usebenzisa i-shampoo ye-Tigi, kufanele usebenzise inani elilinganiselwe lamafutha, ungasebenzisi kakhulu ukuze izinwele zakho zinganamatheli.
– Ungakwazi ukuhlanganisa i-Tigi Green Shampoo ne-conditioner ekhethekile ye-Tigi ne-conditioner ukuze uthuthukise ukunakekelwa kwezinwele okuphumelelayo kakhulu.
Ngenhla ulwazi lwethu mayelana nomugqa i-shampoo ye-tigi eluhlaza zihola emakethe. Ukuze ube ne-salon yezinwele ezithambile, eziqinile futhi ezibushelelezi, i-shampoo ye-Tigi eluhlaza iyoba yisinqumo esifanele kuwe. Ngakho-ke, uma unesidingo sokukhetha ukuthenga, ungakhohlwa ukubhekisela kulesi sihloko ukuze uthole iziphakamiso eziwusizo nezeluleko!
Mhlawumbe unentshisekelo: [Review] Ingabe i-shampoo ye-tigi ensomi iyasebenza ngempela? Malini?
Xem Thêm Kem dưỡng da Thái Lan là gì? 5 sản phẩm được ưa chuộng nhất | Muasalebang